Fizahan-tany mpandray anjara: Fikambanan'ny mpampiarahaba iraisam-pirenena natsangana tany Bruxelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Fizahan-tany mpandray anjara: Fikambanan'ny mpampiarahaba iraisam-pirenena natsangana tany Bruxelles
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny mpamangy dia olona eo an-toerana izay manome mpizahatany fahitana tsy mahazatra, am-boalohany ary manokana momba ny tanànany na ny manodidina azy, amin'ny fomba tsara sy mandray. Ity hevitra ity dia ohatra tonga lafatra amin'ny fironana amin'ny fizahan-tany hafa, izay mitaky fitadiavan'ny mpizahatany mitady traikefa marina kokoa. Izy io dia maneho ny fizahan-tany mpandray anjara, fiara ho an'ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe ary vato fehizoro amin'ny fitomboan'ny mpizahatany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21.
Ny Global Greeter Network dia manana mpikambana mihoatra ny 140 manerana ny vazan-tany 4. Afaka mirehareha amin'i Bruxelles ho iray amin'ireo toeran-jotra Global Greeter 6 nahita ny fiakaran'ny fitsidihana lehibe indrindra, niaraka tamin'i Paris, New York, Chicago, Brisbane ary Hamburg.
Androany, Brussels Greeters ary visit.brussels dia faly manambara ny famoronana ny International Greeter Association (IGA). Ny tambajotran'ny Brussels Greeters dia serivisy fizahan-tany maimaimpoana mandray anjara, miankina amin'ny asa an-tsitrapo sy ny hafanam-pon'ireo mponina ao Bruxelles. Miara-miasa amin'ny visit.brussels, ny tanjony dia ny fandraisana sy fanampiana ireo mpitsidika hahita ny tanàna. Ny fananganana IGA any Bruxelles dia manamafy ny fijoroana iraisam-pirenena eto an-drenivohitra ary mampitombo ny fomba fiasa mavitrika amin'ny fiaraha-miasa eo an-toerana.
Visit.brussels (sy ireo mpampiarahaba Bruxelles), CDT Pas-de-Calais, Hamburg Greeters, Cicerones of Buenos Aires, Paris Greeters ary Select Chicago no mpikambana mpanorina, izay tsy ho ela dia hiara-hientana ireo tambajotra 140 misy. Ny tambajotra eran-tany dia andrasana hitombo 5% ao anatin'ny roa taona.
Bruxelles, renivohitry ny fikambanana iraisam-pirenena, misy 2,300 mahery monina ao an-tanàna, manomboka izao, dia ho mpitarika ny fizahan-tany mandray anjara ihany koa.